လေယာဉ်ပေါ်က စွန့်ပစ်ခံ ကလေးငယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » လေယာဉ်ပေါ်က စွန့်ပစ်ခံ ကလေးငယ်
လေယာဉ်ပေါ်က စွန့်ပစ်ခံ ကလေးငယ်
Posted by Zaw Wonna on Sep 13, 2010 in News, World News |7comments
2010 News ကလေး
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာလေဆိပ်တွင် မွေးကာစ ကလေးငယ်လေး တစ်ဦးအား လေယာဉ် အမှိုက်အိတ်အတွင်းမှ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ Gulf လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ဘာရိန်းနိုင်ငံမှ ရောက်ရှိလာသော လေယာဉ်ပေါ်မှ ကလေးငယ်မှာ ချက်ကြိုး တန်းလန်းနှင့် ဖြစ်ပြီး သွေးများဖုံးလွှမ်းနေကာ တစ်ရှုးစက္ကူများဖြင့် ပတ်ထားသည်။ ကလေးငယ်မှာ အသက်ရှင်ဆဲ ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ကြောင်း သိရသည်။ အစိုးရ အရာရှိပိုင်းက ရဲများအား ကလေး၏ မိခင်ဖြစ်သူကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်၍ အပြစ်ပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားနေကြကြောင်း ပြောကြားသည်။
Gulf လေကြောင်းလိုင်း၏ သင်္ကေတဖြစ်သော GF ကိုရည်ရွယ်၍ George Francis ဟု အမည်ပေးထားသော ၄င်းကလေးငယ်မှာ ယောက်ျားလေး ဖြစ်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Ninoy Aquino နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်မှ လုံခြုံရေး ရဲတစ်ဦးသည် လေယာဉ်အိမ်သာ အတွင်းမှ ချထားသော အမှိုက်အိတ်အတွင်းမှ လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုကို သတိပြုမိကာ ကလေးငယ်အား တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကလေးငယ်အား လက်ရှိစောင့်ရှောက်ထားသော ဆရာဝန်များက ကလေးငယ်၏ မိခင်သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံများတွင် သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်သော ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုး များစွာထဲမှ တစ်ဦး ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြသည်။
Source; BBC News (13 September 2010)
မရှင်းလို့နော် ကလေးကို လေယာဉ်ပေါ်မှာ မွေးတာများလား.. ကလေး မမွေးရသေးခင်မှာတော့ လူကြီး ဗိုက်ကတော့ ညာမရဘူးနော်။ တရားခံရှာမရဘူးဆိုတော့ တမျိုးတော့ တမျိုးဘဲ..
ရက်စက်လိုက်တာ ကလေးအမေရယ်..။ မွေးပြီးယူလာတာ ဖြစ်ရမယ် ထင်ပါတယ်ဗျာ။
လေယာဉ်ပေါ်တက်မယ်ဆို ဟိုက စစ်ဒီကစစ်နဲ့ အသိသာကြီး ဘွတ်ဖိနပ်လို ဖိနပ်မျိုးစီးထားရင်တောင် အထဲက သံချောင်း သံပြားခေါ်မလား အဲဒါတောင် အတင်း ဖိနပ်ကို ရှာဖွေပြီး ဖိနပ်လဲပြီး အစစ်ခံရသေးတာ။ X ray က အကုန်လုံးမြင်ရတာ အပြင်ကနေ ယူလာတာဆိုရင်တော့ ဒါဟာတော်တော် ညံတဲ့ စစ်ဆေးရေးသမားဘဲ။
တော်တော် သနားစရာကောင်းတဲ့ ကလေးဘဲ
ဘယ်လိုမိခင်မျိုးပါလိမ့် . . . နာနာကြင်ကြင်နဲ့မွေးထားပြီးမှနော် . . . ကလေးကလည်း ရှေးဘ၀က အကုသိုလ်တော်တော်ကြီးတယ်နဲ့တူတယ်နော် . . .
မိဘမဲ့လေးဖြစ်နေရတယ် . . .
ရေးထားတာအရဆိုရင် လေယာဉ်ပေါ်မှာမွေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။ ချက်ကြိုးက တန်းလန်းနဲ့ကိုး ။ နဂိုကတည်းက မွေးပြီးရင် စွန့်ပစ်ဖို့အစီစဉ်ရှိပုံရတယ် ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လေယာဉ်ပေါ်မှာမွေးတော့ ထားခဲ့တာပဲဖြစ်မယ် ။ မလုပ်ရက်တဲ့ကိစ္စမျိုးပါ ။ အဲ့ဒီနေ့က စီးလာတဲ့ လူစာရင်းကိုပြန်စစ်ရင် လိုက်လို့ရပါတယ် ။
လူကြီး ဗိုက်ကတော့ ညာမရဘူးနော်။ တရားခံရှာမရဘူးဆိုတော့ တမျိုးတော့ တမျိုးဘဲ”